EXPOSITION CEVAA - Ny Fiangonana Presbyteriana eto Maorisy
Navoaka ny 19 Novambra 2021
Araka ny efa nambara teo aloha, tao anatin’ny fetin’ny faha-50 taonan’ny Cevaa, dia nanomana fampirantiana ny hetsika Cevaa, tetikasa ary hetsika hafa nandraisan’ny EPM anjara nandritra ireo taona ireo ny Filankevitry ny Synodaly. Hanomboka ny talata 23 novambra amin’ny 4 ora sy sasany hariva ao amin’ny Foibe Jean Le Brun an’i Pasitera Kiki ity fampirantiana ity.
Azonao jerena mivantana ao amin’ny pejy Youtube Fiangonana Presbyteriana Maorisy ity fandefasana ity.
Noho ny fameperana dia tsy haparitaka eto amin’ny paroasy izahay amin’izao fotoana izao. Afaka manatona ny Foibe Jean Le Brun ny talata sy alarobia manomboka amin’ny 10 ora maraina ka hatramin’ny 2 ora tolakandro ireo izay te hahalala ny fampirantiana.
Hamaky eto ihany
MITSIDIKA: PASTERA CÉLESTIN KIKI
DEPARTEMENT VEHIVAVY SY NY FIANAKAVIANA - PEJY FACEBOOK